A na-ahụ nkịta kpụkọrọ akpụkọ na Germany n'ihi oke ikuku oyi | Netwọk Mgbasa Ozi
A na-ahụ nkịta kpụkọrọ akpụkọ na Germany n'ihi oke oyi
Na oyi na-atụ snap nke sitere na Siberia nke dakwasịrị ọtụtụ Europe ahapụla ọtụtụ ebe na nche maka snow, oke oyi, mmiri ozuzo na ifufe siri ike. Mana ọ hapụwokwa ihe onyonyo dị mkpa nke mmebi anụ ọhịa.
Otu foto na-agbasa kachasị na ịntanetị bụ nke nkịta oyi kpọnwụrụ nke a hụrụ na osimiri Danube.
Onye agbata obi Fridingen an der Donau chọtara nkịta ọhịa ahụ (Baden-Württemberg, Germany) na mpaghara nwere ezigbo kristal kristal ihe dị ka sentimita 60. A na-eme atụmatụ na nkịta ọhịa na-achụ ụfọdụ anụ oriri ma mgbe ọ gafere site na ice n'elu osimiri ahụ, ọ gbawara wee daba n'ime mmiri fọrọ nke nta ka ọ kpọnwụrụ akpọnwụ.
N'ihi oke oyi, anụmanụ ahụ kpọnwụrụ. Ọ bụ ezie na ụbọchị ọnwụ abụghị nke ọma, a na-ahụta ka ọ dị nso. Franz stehle, Nwoke nke chọtara nkịta ọhịa a, kpuchie onwe ya ma kpoo ozu anụmanụ ahụ oyi kpọnwụrụ. Iji wepu ya, o gha agha iji igwe lelee. Nkịta ọhịa ahụ nọ na ice transperent nwere ike ịhụ silhouette gị niile.
Ọnọdụ ebe nkịta ọhịa ahụ nwụrụ yiri ọnọdụ ụmụ anụmanụ nọ na ebe ndebe ihe mgbe ochie. Na mgbakwunye, ihe ndị mmadụ kwuru na netwọkụ mmekọrịta na -eji ya ụfọdụ onyogho nke anụmanụ kpụkọrọ akpụkọ site na ihe nkiri eserese dị ka Afọ Ice. Franz Stehle abụrụla onye ama ama mgbe ekesara ya na foto na akwụkwọ akụkọ na nkịta oyi.
Mana nkịta a abụghị naanị onye oyi na-atụ. Edere foto nke nwoke elk abụọ oyi kpọnwụrụ na November gara aga na nso obodo Alaska nke Unalakleet. N'okwu a, ụmụ anụmanụ nwụrụ n'ihi obere okpomọkụ jikọtara ha na mpi ha ka ha na-alụ ọgụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » A na-ahụ nkịta kpụkọrọ akpụkọ na Germany n'ihi oke oyi
Satọde NASA nke GOES-16 na-ezigara onyogho mbido mbụ nke ụwa
Foto ndị na-awụ akpata oyi n’ahụ́ na-egosi etu okpomoku zuru ụwa ọnụ siri emetụta Arctic